L2 Beddelayaasha Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha L2 Warshad Beddel
S4600-28X-SI 10G Wareejinta Helitaanka Ethernet ee Sirdoonka
S4600-28X / 52X-SI waa L2 10G isbeddel maskaxeed oo casri ah oo loogu talagalay xambaaraha iyo shabakadaha MAN. Waxay taageertaa QoS dhammaystiran, shaqooyinka VLAN ee la xoojiyay (Dynamic VLAN, Voice VLAN, QinQ, N: 1 VLAN Translation iwm), Ethernet Ring Protection Protocol (G.8032), xakamaynta xadka ballaadhinta, xakamaynta amniga caqliga, OAM (Hawlgallada, Maamulka iyo Dayactirka) ), Hawlaha maareynta iyo adeegyada Triple-Play ee fuliya shuruudaha shabakadda ee ay dalbadeen shabakadda gudbiyaha, helitaanka MAN. S4600-2 ...
S4600-SI Gigabits Dual Stack Switch Intelligent
DCN S4600-SI taxane ah ayaa si buuxda isu bedelaya GbE oo bixiya galaangal heer-ganacsiyeed ah oo loogu talagalay ardeyda xerada iyo laanta. Beddelayaashan si buuxda loo maareeyay waxay ku siin karaan astaamaha Lakabka 2 ee horumarsan iyo sidoo kale awood Ikhtiyaar ah oo ka sarreeya Ethernet Plus (PoE +). wuxuu isku xiraa maareynta horumarsan iyo howlaha amniga si loo bixiyo waxqabad iyo isugeyn. Waxay u tahay xalka ugu fiican shirkad iyo gudbiyaha marin u helka shabakada. Astaamaha Muhiimka ah iyo Iftiiminta Taxanaha Tamarta Cagaaran S4600-SI waxay u hoggaansameysaa IEEE ...
S4200-SI Taxanaha L2 Gigabits Dual Stack Switch Intelligent
Taxanaha DCN S4200-SI waa kuwo kharash-ku-ool ah oo beddelaadyo GbE ah oo bixiya marin-heer shirkadeed oo loogu talagalay codsiyada xerada iyo laanta. Beddelayaashan si buuxda loo maareeyay waxay ku siin karaan astaamaha Lakabka 2 ee horumarsan iyo sidoo kale awood Ikhtiyaar ah oo ka sarreeya Ethernet Plus (PoE +). Loogu talagalay fududaynta hawlgalka si loo yareeyo wadarta qiimaha lahaanshaha, waxay u suurta geliyaan hawlgallo ganacsi oo la qiyaasi karo, la isku halleyn karo, oo tamar ku habboon leh oo leh adeegyo caqli badan. Noocyada Muhiimka ah iyo Tilmaamaha taxanaha Tamarta Cagaaran S4200-SI waxay u hogaansameysaa wi ...